Kidzco - celebrating childhood
एक विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस्
बच्चाको अन्तर्दृष्टि: उनीहरूको दिमागमा परिवर्तन
बच्चाको प्रतिरक्षा खोपको तालिका
प्राथमिक उपचार युक्तिहरू
बच्चाको गीत / भिडियो
स्रोत / साधन
बच्चाको सुरक्षाको जाँचसूची
प्रतिरक्षा खोप कैलक्यूलेटर
शरीर मास सूचकांक (BMI) कैलक्यूलेटर
बालबालिका अस्पताल सूची
नेपालामा ६०% बालबालिकाहरुको चोटपटक घरभित्र लाग्दछ
हरेक उमेरका बालबलिकहरुमा सबै भन्दा धेरै चोटपटक लडेर लाग्ने गरेको छ। के तपाईले आफ्नो बालबालिकाको सुरक्षाको लागि आफ्नो घरमा सुरक्षा सामाग्रीको प्रयोग गरिसक्नुभयो ? साधारण सामाग्रीले पनि तपाईको घरमा चोटपटकको जोखिम घटाउन सक्दछ।
बच्चाहरुको खोपका तालिका: राष्ट्रिय प्रतिरक्षा कार्यक्रम
धेरै हानिकारक रोगहरू विरुद्ध तपाईंको बालबालिकाको रक्षा गर्नको लागि प्रतिरक्षा खोप (Vaccine) एकमात्र प्रभावकारी तरिका हो। आफ्नो बालबालिकालाई निश्चित रुपमा प्रतिरक्षा खोप (Vaccine)को पुरा मात्रा खुलाउनुहोस । नेपालको सरकारद्वारा प्रदान गरिएको प्रतिरक्षा खोप पूर्ण सूची प्राप्त गर्नुहोस्।
लजालु बच्चाहरुलाई कसरी बुझने
लजालुपनलाई हामी प्राय गलत तरिकाले हेर्छौ र यो नकारात्मक विशेषता होइन । तपाईको बच्चाले केवल केहि सामाजिक कौशलता मात्र चाडो विकास गर्नु छ ।
हरेक अभिभावकलाई थाहा छ कि बच्चाहरुलाई हुर्काउदा केहि न केहि चोटपटक लागेकै हुन्छ; सानो वा ठुलो । अस्पताल पनि पुराउन परेको होला।
अभिभावक - एक नयाँ यात्रा
आमाबुवा बन्नु तपाईको जिवनको एउटा चुनौतिपुर्ण र आनन्दायक यात्रा हो। हामी प्रायः ठूलो आशा र अपेक्षाहरूको साथ यो नयाँ यात्रामा जान्छौं। आफ्नो सन्तान हुनुमा तपाईलाई छुट्टै खालको रमाइलो र आनन्दको आभाश हुनु स्वभाभिक नै हो।
तर कहिलेकाहीँ, यो यात्रामा तपाई आश्चर्यमा पर्न सक्नुहुने छ। र कहिलेकाँहि दिक्क र वाक्क पनि हुनु हुनेछ।
लेख सबै हेर्नुहोस्
नवजात शिशुको स्यहार
By Dr. Needa Shrestha
कसरी हुन्छन बच्चाहरु स्मार्ट (Smart)
बच्चाहरुको दाँतको ख्याल
By Parajeeta Dikshit
के तपाईको बच्चाको द्रिष्टि सामान्य छ?
पहिलो सहायता युक्तिहरू सबै हेर्नुहोस्
एलर्जी प्रतिक्रियाहरू खाद्य पदार...
Broken bones (or fractures) areacommon injury in kids, especially afterafall. No matte...
Animal bites and scratches that break the skin can sometimes cause infection. Some bites n...
"आमाबाबुको सुझाव र जानकारी मा मासिक न्यूजलेटरको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र तपाईंको बच्चाको मासिक वृद्धि र विकासको ट्रयाक गर्नुहोस्"
"Every child is different when it comes to sleep" Types of Sleep (Basics) There are two main kinds of sleep – light sleep and deep sleep. Light sleep is when we dream and ‘go over’ the day’s events and wake feeling refreshed. It is also the kind of sleep where we wake more easily. With babies this is 80% of sleep, but by adolescence it is only about 20% of sleep. Deep sleep is when growing and healing takes place. It is much harder to wake people from this kind of sleep. Each night we all go through sleep cycles from...
हाम्रो बच्चाहरु केही अचम्मका क्षमताहरूसँग जन्मिएका हुन्छन् - उनिहरु केवल अनुभवले मात्रै सिक्दैनन्। उनिहरु जन्मेको क्षणबाट तिनीहरु तपाईको औंला पकड्न, आँखामा हेर्न, अङ्गालोम बस्न सक्ने कुराहरुले तपाईलाई अच�...
When we’re pregnant or awaiting adoption, we dream about our baby-to-be, we always envision those beautiful Hallmark card scenes: charming baby smiling up at peaceful mother’s face. We read books in advance of the big day about how care foranewborn, how to bathe, feed and dress her, and then we feel somewhat prepared. However,acrying baby was never part of that idyllic vision, so this takes us by surprise. But the fact is, all babies cry at one time or another. Some babies cry more than others, but they all do cry. Understanding...
हाम्रो विशेषज्ञ भेट्नुहोस्
डा। अनिल कुमार श्रेष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, कान्ति बाल अस्पताल
डा। दीपक श्रेष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ - परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल
डा. रोश्मा गुरुङ बाल रोग विशेषज्ञ, कान्ति बाल अस्पताल
शारदा अधिकारी प्रिन्सिपल, किड्जी प्रि-स्कुल, ताहाचल
डा। अनु महर्जन बाल रोग विशेषज्ञ, कान्ति बाल अस्पताल
डा. निधा श्रेष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल
डा पराजिता दिक्क्षित बाल दन्त चिकित्सक, कन्तिपुर दन्त कलेज
सामान्यतया 0-4 वर्षका बालबालिकाहरू, तर व्यावहारिक रूपमा 1-2 वर्षका बच्चाहरू, उनीहरूको वातावरण पत्ता लगाउन थालेका छन्, तर खतरा पहिचान गर्न असमर्थ हुन्छन्, वा आफूलाई सुरक्षित राख्ने कार्यमा लाग्दैन। लगभग 60% (विश्वभरका विश्वभर र 56%) चोटका कारण घर र पिछवाडेमा हुन्छन्। युवा छोराछोरीहरू वयस्कृतका लागि डिजाइन गरिएका छन्। ऊँचाई, ठाउँ, र ढाँचा वयस्क आवश्यकता र सान्त्वनाको लागि बनाइएको छ, तर यी प्रायः बालबालिकाहरु लाई खतरनाक हुन्छ। तर तपाईं आफ्नो क्रिल्डरको लागि आफ्नो घर सुरक्षित स्थान बनाउन केहि कदम लिन सक्नुहुन्छ।
प्रशिक्षण र सिकाइ
वृद्ध छोराछोरीलाई सुरक्षामा प्रशिक्षण दिनुहोस्। तिनीहरूलाई वरपरको खतरनाक बारेमा सिकाउनुहोस् र तिनीहरूलाई कसरी ठीकसँग व्यवहार गर्न तिनीहरूलाई देखाउनुहोस्।
कुन जवान किशोरहरूले सुरक्षित रूपमा गर्न सक्छन् काम गर्ने बारे यथार्थवादी हुनुहोस्। तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक तालिम दिनुहोस् र तिनीहरूको कामको निरीक्षण गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले सुरक्षात्मक कपडा, अनुहार र कानको सुरक्षालाई आवश्यक पर्दछ जहाँ आवश्यक छ।
जब तपाईं आफ्नो बच्चाको सामने मुठभेड गर्नुहुन्छ सँधै व्यवहार व्यवहारको प्रशंसा गर्नुहोस्।
भान्सा सुरक्षा सुझावहरू
यदि तपाईंको बच्चाले जलाउने वा घोडा लगाउँदछ भने, कम से कम 20 मिनेटको लागि ठुलो चल्ने पानीको तुरुन्तै ठोक्नुहोस्।
आफ्नो बच्चाहरु लाई सधैं कुकुरबाट रोक्न र खाने देखि छुटकारा खाने को लागि बस्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
सबै खतरनाक र सुविधाहरू जस्तै चाकू, काँटा र कैंचीहरू लक गरिएको दराजमा वा बच्चाको पहुँचबाट बाहिरको उच्च स्थानमा राख्नुहोस्।
तातो बर्तन राख्नुहोस् (खाना पकाउने) बालबालिकाको पहुँचबाट टाढा।
बाल स्केलेड को लागि हावा पानी प्रमुख कारण हो। याद गर्नुहोस् कि तातो पानी उबलिएको 30 मिनेट पछि डराउँदछ। त्यसो त त त्यसमा कार्य लिनुहोस्।
औषधि भण्डारण, डिटर्जेंट केक, पाउडर, शैम्पोस, ब्लीचको जस्तै रासायनिक उत्पादनहरू एक बन्द गरिएको अलबोर्डमा ब्लीच अधिमानतः 1.5 एमएम भन्दा उच्च जमीन वा ऊभन्दा उच्च स्थानमा पुग्न सकिन्छ।
सामान्य सम्भावित विषाक्त वस्तुहरू समावेश छन्: औषधिहरू - काउंटरमा, उत्पादन सफा गर्न, धुलाई पाउडर, डिटर्जेंट केक, काट्टेस्टर, कीटनाशक, ब्लीच र कस्मेटिक्स वस्तुहरू।
पर्ची र पतनबाट बचाउन बाथरूममा विरोधी पर्ची स्टिकर राख्नुहोस्। सम्भावित घातक बाल चोटको जोखिममा पर्दा र गिरावटलाई मानिन्छ।
तपाईंको बच्चाहरु एक्लै पानी नजिकै नछोड्नुहोस्। बच्चाहरू स्वचालित रूपमा प्लेफूलनेस रवैयाको रूपमा पानी तिर आकर्षित हुन्छन्। त्यसैले तपाईंको घनिष्ठ आँखा बिना दुर्घटनाहरू हुन सक्छ।
बच्चाहरुलाई शौचालय आवरण खोल्न र आफ्नो पानी सम्म पुग्न रोक्नुहोस्। बालबालिकामा खसेको खतरा बढ्दो हुन्छ जब बच्चा झन्डै पानी पुग्छ। यसले ठूलो शहरी शहरहरूमा डूबिरहेको घटना बढेको छ। साथै जोड्नुहोस् कि तिनीहरू फोन, ट्याबलेट जस्तै स्थायी क्षतिको कारण इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुहरू फेंकन्छन्। त्यसैले तपाईका बच्चाहरू हुँदा तपाईंको शौचालयमा शौचालय ताला प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छ।
सधैं सम्झना छ कि बिजुली, पानी र बच्चाहरु खतरनाक मिश्रण हुन्। त्यसैले सकेसम्म यो अलग राख्न कोसिस गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
सामान्य सुरक्षा प्रयोग गर्नुहोस् रगग ग्रिप्स (कालीनहरू) फिसिङ र यात्रा खतराबाट फिसल फ्लोर र पोल्ड फ्लोरबाट बचाउन।
सुनिश्चित गर्नुहोस् सन्झ्याल9-10 सेकेन्ड भन्दा बढी खोल्न सकिदैन, एक वयस्कले बाहेक दुर्घटनाबाट विन्डोबाट खसेर रोक्नको लागि।
वस्तुहरु र फर्नीचर राख्नुहोस् कि बालबालिकाहरु को उपयोग गर्न को लागी वा balconies र खिडकियों देखि दूर चढने को उपयोग गर्न सक्छन्।
एक लक गरिएको अलबोर्डमा दबाइहरु, रासायनिक उत्पादनहरू भण्डारण भण्डारमा 1.5 एमएम भन्दा उच्च वा बच्चा जहाँ पुग्न सक्दैन।
अनावश्यक र अप्रयुक्त औषधिहरूबाट हटाउनुहोस्।
स्पष्ट रूपमा उनीहरूको मूल कन्टेनरहरूमा सबै दबाइ, क्लीनर र रसायनहरू लेबल गर्नुहोस्।
एक गोद मा बच्चा संग गरम पेय कहिल्यै नदिनुहोस्।
बच्चाहरू यी औंलाहरूमा घुसाउनुहोस् र बिजुलीको सदर प्राप्त गर्न रोक्न टेपको साथ प्रयोग नगरिएको सकेट लुकाउनुहोस्। बेहतर उपयोग बिजुली को सकेट आवरण।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको बच्चाको खेल उपकरण स्थिर छ, कुनै तीव्र किनारहरू छैनन्, वा टुक्राहरू घटाउन सक्दछ।
घुसाउनुहोस् कि बच्चाहरूले सधैँ सुरक्षा गियर प्रयोग गर्दछ जस्तै हेलमेटहरू चक्र र बाइकका लागि।
जहाँ पनि सम्भव छ तीव्र किनारा फर्नीचर हटाउनुहोस् वा बदल्नुहोस्। यदि कपडा वा कुना रक्षक प्रयोग गरेर टेबल कोने कुश्न नगर्ने भने। क्षमा भन्दा राम्रो छ।
बच्चाहरु को एक औंला मा ढोका को कारण एक गंभीर बच्चाहरु को कारण हुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईंको दरवाजा doesnot स्लैम। घर होल्ड समाधानहरू वा ढोका ढोकाहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको फर्नीचरले होइनन स्लाइड। यदि यो हुन्छ तब फर्नीचरको शीर्ष माथि वस्तु तपाईंको बच्चामा हुन सक्छ।
आफ्नो क्याबिनेट दराजलाई पर्खालमा राख्नुहोस्। हालै, इकिडा - एक अन्तर्राष्ट्रिय फर्नीचर ब्रान्डले आफ्नो दराजलाई छानबिन गरेको छ भने छानबिनका छोराछोरीको मृत्यु भएपछि फर्नीचरमा खसेको थियो। यो धेरै खतरनाक छ। T.V. सँगै यदि तपाइँको टिभि पर्खालमा माउन्ट गर्न सक्दछ। यदि त्यसपछि पट्टि प्रयोग नगर्नु र टिभिमा टिभी तय गर्नुहोस्।
छोराछोरीलाई आफ्नो औंला घुसाउन को लागी आफ्नो अप्रयुक्त बिजुली प्लग लुकाउनुहोस्। तपाईं कागज र ट्याप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्लग संरक्षकहरू प्राथमिकतामा छन्।
बर्न र अग्नि सुरक्षा
बच्चाहरु लाई कम आगो जोखिम कपडे मा पोशाक जो निकट फिटिंग हो र कम ज्वलनशील सामाग्री को बनाइयो। सावधान रहनुहोस् कि कपास अत्यधिक ज्वलनशील छ। कम आगो जोखिम लेबलहरूको लागि रातोपरी जाँच गर्नुहोस्।
आफ्नो परिवार र बच्चाहरु संग एक घर आगो बच योजना को विकास। यस योजनालाई अभ्यास गर्नुहोस् कि सबै परिवारका सदस्यहरूले के गर्ने भनेर जान्दछन् र त्यस्ता आपदाको अवस्थामा कहाँ जान्छ।
बच्चाहरूलाई "रोक्नुहोस्, ड्रप, आवरण र रोल" गर्न सिकाउनुहोस् भने तिनीहरूका लुगाहरू आगो लगाउँछन् र घर आगोको स्थितिमा "तल निस्कनुहोस् र जानुहोस्"।
जलाइको अवस्थामा, बच्चालाई सफा कम्पासको साथमा राख्नुहोस्, र चिकित्सा सल्लाह खोज्नुहोस्। बर्फ, तेल, मक्खन, सोया सस र ओइन्टमेन्ट कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। यसले छालालाई अझ बढाउन सक्छ।
तपाईंलाई थप चाहनुहुन्छ बाबु आमा सुझाव र खोप REMINDER तपाईंको इनबक्समा हाम्रो अभिभावक नेटवर्कबाट
Caring for your newborn is full of emotion. Here we'll give you tips on how to survive the first week and beyond as you settle into Motherhood.
Posted by Meira Rai
उपकरण र संसाधन
तपाईंको स्वास्थ्यको बारेमा जान्न यी उपकरणहरू र स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
शरीर मास क्याल्कुलेटर
बच्चाहरु को सुरक्षा
Make your home child friendly by using child safety products. A happy child isahappy home. For more Child Safety and Care products, please visit our child products section. Also you can visit our store at 2nd Floor, EyePlex Mall, New Baneshwor, Kathmandu.
हप्ताको सुरक्षा सुझावहरू
शरीर मास सूचकांक कैलक्यूलेटर